Articles – Page 141 – CELE WINGAGAR
ပုဒ်မ (၅၀၅)က နဲ့ဝရမ်းထုတ်ခံရလို့ ရှောင်ပြေးရ တုန်းက သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကိ်ုပြောပြလာတဲ့အလင်းရောင်…..
July 25, 2021 100million 0
အလင်းရောင်ကတော့ကျော်ကြားတဲ့မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအနု ပညာလောကထဲကိုမော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးခုဆိုရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲတော် တော်များများပါဝင်နေပါပြီ။အလင်းရောင်ကသရုပ် ဆောင်ပညာမှာလဲကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုသရုပ် ဆောင်နိုင်သူလို့ဆိုပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကာလတွေမှာအလင်းရောင်ကကိုင်တိုင်ကိုယ်ကျပြည်သူလူထုနဲ့အတူပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့သူပါ။ခုဆိုစစ်ကောင်စီရဲ့ (၅၀၅)ကနဲ့အမှု့ထူတ်ခြင်းကိုခံထားရတာပါ။မိသားစုနဲ့အဝေးမှာထွက်ပြေးပုန်း ရှောင်နေရတာပဲဖြစိပါတယ်။သူ့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေကလဲသူ့ကိုစိတ်ပူနေကြပါတယ်။ဟိုတလောကသူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခက်ခဲလေးတစ်ခုကိုမျှဝေလာပါတယ်။ အဆင်ပြေသလိုရုပ်ဖျက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါ။သူဘယ်လိုရုပ်ဖျက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ မျက်ခုံး မွေးတွေရိတ်ခဲ့တာပါ၊တကယ်ကိုမမှတ်မိအောင်ပါပဲရုပ်လုံးဝပြောင်းသွားပါတယ်။သူကပြောပြထားပါတယ်”လန့်သွားလားတစ်လကျော်လောက်ကမှတ်မိနေမှာဆိုးလို့ ရုပ်ဖျက်မျက်ခုံးမွေးတွေရိတ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာ” ကို ပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ်။တကယ်မြင်ရင်မှတ်မိမှာတောင်မဟုတ်ပါဘူးနော်။ Credit အလငျးရောငျကတော့ကြျောကွားတဲ့မျောဒယျသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။သူကအနု ပညာလောကထဲကိုမျောဒယျတဈယောကျအနနေဲ့စတငျဝငျရောကျခဲ့ပွီးခုဆိုရုပျရှငျဇာတျလမျးတှထေဲတျော တျောမြားမြားပါဝငျနပေါပွီ။အလငျးရောငျကသရုပျ ဆောငျပညာမှာလဲကရြာဇာတျရုပျကိုသရုပျ ဆောငျနိုငျသူလို့ဆိုပါတယျ။ တျောလှနျရေးကာလတှမှောအလငျးရောငျကကိုငျတိုငျကိုယျကပြွညျသူလူထုနဲ့အတူပါဝငျဆန်ဒပွခဲ့သူပါ။ခုဆိုစဈကောငျစီရဲ့ (၅၀၅)ကနဲ့အမှု့ထူတျခွငျးကိုခံထားရတာပါ။မိသားစုနဲ့အဝေးမှာထှကျပွေးပုနျး ရှောငျနရေတာပဲဖွစိပါတယျ။သူ့ရဲ့ပရိတျသတျတှကေလဲသူ့ကိုစိတျပူနကွေပါတယျ။ဟိုတလောကသူထှကျပွေးတိမျးရှောငျရတဲ့အခကျခဲလေးတဈခုကိုမြှဝလောပါတယျ။ အဆငျပွသေလိုရုပျဖကျြပွီးထှကျပွေးခဲ့ရတာပါ။သူဘယျလိုရုပျဖကျြခဲ့ရလဲဆိုတော့ မကျြခုံး […]
ပြည်သူတွေ အတွက်လိုအပ်လာရင် သူမ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြေကွက်ကို ပရဟိတအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးမယ့် ဇာဇာထက်….
ပရိသတျကွီးရေ မျောဒယျလျ ဇာဇာထကျကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျမှုကို ရရှိထားတဲ့ ပရိသတျအခဈြတျော တဈယောကျပါ။ ဇာဇာထကျကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ဒီကာလပွညျသူတှအေတှကျ အကြိုးရှိမယျ့ လုပျငနျးစဉျတှလေုပျဆောငျမယျဆို သူ့ပိုငျဆိုငျတဲ့ မွကေို အခမဲ့ အသုံးပွုခှငျ့ပေးသှားမယျလို့ ဖျောပွလာခဲ့ပါတယျ။ အခုကာလမှာ ကိုဗဈ တတိယလှိုငျးကွောငျ့ ပွညျသူတှအေတှကျ အောကျစီဂငျြရရှိရေးတဲ့ ကူးစကျခံရတဲ့ […]
ခုလတျတလော ခံစား နကွေရတဲ့ အနံ့မရသာ ၊ ခြောငျးဆိုး တာ တှအေတှကျ သဘာဝ ဆေးနညျး ကောငျးလေးကို ညှနျပွလာတဲ့ ထူးခနျ့ကြျော…
ထူးခနျ့ကြျောကတော့ အကျရှငျ ဇာတျရုပျတှကေို ပိုငျနိုငျသလို ပီပွငျ ပွောငျမွောကျလှနျးတဲ့ သရုပျဆောငျ စှမျးရညျတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေို ရသမြိုးစုံ ပေးစှမျးနိုငျသူပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ သူတတျကြှမျးတဲ့ ဆေးပညာရပျလေးနဲ့ တဈဖကျတဈလမျးကနေ လဖွေတျလူနာတှအေား တိုငျးရငျးဆေးဖွငျ့ နှိပျနယျ ကာ ကုသပေးနသေူလညျး တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ […]
မော်ဒယ်ချာလီနဲ့မော်ဒယ်ဒီး (Dee) တို့ချစ်သူ နှစ်ဦးရဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှတဲ့ relationship ဗီဒီယိုလေး….
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….မော်ဒယ်ချာလီကတော့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူမော်ဒယ်လောကမှာအောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်သလို ချာလီရဲ့ချစ်သူ မော်ဒယ်ဒီး(Dee) ဟာဆိုရင်လည်း အလန်းစားအမိုက်စားမော်ဒယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ချာလီကတော်တော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကပါဝင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေနဲ့အတူလမ်းထွက်ကာလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားတက်သရောပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဆိုးရောဂါကြီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲအောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှူံးရတဲ့ပြည်သူတွေလဲများပြားနေပါတယ်။မော်ဒယ်ချာလီဟာဆိုရင်လဲပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့လဲသူသိသလောက်ကိုသူ့ရဲ့Instagramအကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားလေ့ရှိပါတယ်။ ချာလီကသူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ချစ်သူသက်တမ်းရက်ပေါင်း (၉၀၀)ပြည့်တဲ့နေ့မှာ တရားဝင်ချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ ချာလီနဲ့ဒီး(Dee)တို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီး လိုက်ဖက်လွန်းနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို Charlie + Dee ဆိုတဲ့ Fan Page လေးကနေအခုလိုပဲတစ်ဆင့်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit မျောဒယျခြာလီကတော့အမိုကျစားခန်ဓာကိုယျနဲ့အတူမျောဒယျလောကမှာအောငျမွငျပွီးသားဖွဈတဲ့မျောဒယျတဈယောကျပဲဖွဈသလို ခြာလီရဲ့ခဈြသူ မျောဒယျဒီ(Dee) ဟာဆိုရငျလညျး အလနျးစားအမိုကျစားမျောဒယျလေးပဲဖွဈပါတယျနျော.။ခြာလီကတျောတျောလှနျရေးကွီးမှာလဲပွညျသူတှနေဲ့အတူအမှနျတရားဘကျကပါဝငျခဲ့ပွီးပွညျသူတှနေဲ့အတူလမျးထှကျကာလူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားတကျသရောပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ […]
သာသာနာ့ေ ဘာင်ဝင်ရောက်နေစဉ် မှာပင် လမ်းမှာတွေ့သမျှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်း ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ လှူဒါန်းပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်စူးရှထက်..
သာသာနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်နေစဉ်မှာပင် လမ်းမှာတွေ့သမျှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုလည်း ပြုံြး ပုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ လှူဒါန်းပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ်စူးရှထက်.. မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စူးရှထက်ကတော့ အလှူအတန်းအရမ်းရက်ရောပြီး ချို့တဲ့သူတွေကို အမြဲကူ ညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလတ်တလောမှာဆိုရင်လည်း စူးရှထက်က သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်ရောက်နေတာ (၅)ရက်လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ သီလရှင်ဝတ်တာ သူမအတွက် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ဆရာလေးအဖြစ်နဲ့လည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှူတွေကို နေ့စဉ်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေတာကို […]
တောထဲမှာ ခကျခဲပငျပနျးစှာ နထေိုငျနရေ ပမေယျ့ စိတျဓာတျ မကဘြဲ အတူတူ ရငျဆိုငျကြျောဖွတျနကွေတဲ့ မဦေးတို့ခဈြသူနှဈဦး….
တောထဲမှာ ခကျခဲပငျပနျးစှာ နထေိုငျနရေပမေယျ့ စိတျဓာတျမကဘြဲ အတူတူရငျဆိုငျကြျောဖွတျ နကွေတဲ့ မဦေးတို့ခဈြသူနှဈဦး ပရိသတျကွီးရေ မဦေးတို့ ခဈြသူနှဈဦးဟာ အမှနျတရားဘကျက ရပျတညျရငျး စဈကောငျစီရဲ့ ဖမျးဆီးမှုခံရမှာ စိုးတဲ့အတှကျ လှတျမွောကျနယျမွတေဈနရောတှငျ သှားရောကျခိုလှုံနကွေပါတယျနျော။ ဒီနလေ့ညျး သူတို့နှ ဈယောကျရဲ့ခဈြသူသကျတမျး (၅) နှဈပွညျ့ နရေ့ကျလေးပါနျော။ တဈယောကျကို တဈယောကျ […]
ပွညျသူတှေ ဆငျးရဲဒုက်ခရောကျ နခြေိနျမှာ ပွညျပနိုငျငံ တှငျ သာယာခမျြးမွစှေ့ာ နထေိုငျ လကျြရှိနတေဲ့ ခရိုနီ ဦးတဇေရဲ့ သမီးအငယျဆုံး….
ပွညျသူတှေ ဆငျးရဲဒုက်ခရောကျနခြေိနျမှာ ပွညျပနိုငျငံတှငျ သာယာခမျြးမွစှေ့ာ နထေိုငျလကျြရှိနတေဲ့ ခရိုနီ ဦးတဇေရဲ့ သမီးအငယျဆုံး ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အခမျြးသာဆုံး စာရငျးဝငျသူမြားထဲတှငျ ဦးတဇေတဈဦးလညျး အပါအဝငျ ပါပဲနျော။ဦးတဇေဟာ သဈတောမြား ပွုနျးတီးတဲ့အထိ ခုတျထှငျပွီး တိုငျးပွညျရဲ့သယံဇာတ မြားကို ရောငျးခပြွီး အခမျြးသာဆုံးစာရငျးဝငျခဲ့ပါတယျနျော။မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး သူတို့ပိုငျဆိုငျမှု တှကေ မနညျးမနောပါပဲနျော။ […]
မိဘနှဈပါးစလုံး ကိုဗဈဖွဈ နတောတောငျ ပွနျလာ ခှငျ့မရဘဲ အဝေး ကနပေဲ ဖုနျးဆကျ ပွီး ဂရုစိုကျပေးနရေတာကွောငျ့ စိတျထိခိုကျနတေဲ့ သူဇာဝငျ့လှငျ….
ပရိသတျကွီးရေ မျောဒယျသူဇာဝငျ့လှငျဟာ Miss Universe သှားပွိုငျပွီး မွနျမာနိုငျငံကို ပွနျလာလို့ မရတော့တာကွောငျ့ ပွညျပမှာပဲ အနုပညာအလုပျတှေ လုပျကိုငျနပေါပွီနျော။ မိဝေးဖဝေး နထေိုငျရတာကွောငျ့ အိမျကိုလှမျးနကွေောငျးကိုလညျး အမွဲတမျး တငျလရှေိ့ပါတယျနျော။ဒီနမှေ့ာလညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ မိဘနှဈပါးလုံး ကိုဗဈရောဂါခံစားနရေတဲ့အတှကျ အတျော လေးကို စိတျသောကရောကျနရေပါတယျနျော။ […]
အင်းစိန်ထောင်တွင်းက သတင်းတွေကြောင့် ပိုင်တံခွန် ကို စိတ်ပူတဲ့အေ ကြာင်းပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း…
ချစ်လှစွာသော ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကထူးခြားတဲ့အသံတွေနဲ့အတူ အမိုက်စားတေးသီချင်းကောင်းများစွာကို သီဆိုထားပြီးပရိတ်သတ် တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကမကြာခဏဆိုသလို တန်းဖိုးရှိတဲ့စာသားများနဲ့ဗွီဒီယိုများကိုသူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်း လွန်းတာကြောင့်လဲပရိတ်သတ်ကြီးတွေကပိုပြီးအားပေးချစ်ခင်နေရပါတယ်..။ ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကဒီပုံလေးရိုက်ခဲ့တဲ့နေ့တုန်းကမောင်နှမ (၂) ယောက်သားတစ်နေ့ကျကိုယ်လည်း ဝရမ်းပြေးဖြစ်မယ်မတွေးမိခဲ့သလို သူလည်းမတရား ထောင်ချခံရမယ်လို့မစဉ်းစားမိခဲ့ကြဘူး။ IceCreamSandwich တွေစားပြီး Shooting တစ်ဖွဲ့လုံးပျော်နေခဲ့ကြတာ၊ January […]
မှေးနအေ့လှူလေး အဖွဈ ကာလဒါနအလှူလေး တှေ ပွုလုပျလှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ဟနျတီ….
ပရိသတျကွီးရေ ပရိသတျတှရေဲ့အခဈြတျောအလှမယျ ဟနျတီကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ရဲ့မှေးနရေ့ကျမွတျကရြောကျ ခဲ့ပါတယျ။ ဒီနေ့ ဇူလိုငျလ (၂၅)ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ မှေးနရေ့ကျမွတျလေးမှာ ဟနျတီက မှေးနအေ့လှူလေးအဖွဈ နာမကနျြးဖွဈနတေဲ့ သံဃာာတျောတှနေဲ့ ကလေးငယျတှအေတှကျ သူတတျနိုငျသောကျ အလှူလေး ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ နာမကနျြးဖွဈနတေဲ့ သံဃာတျောတှအေတှကျ ဆေးဝါးတှနေဲ့ ဆှမျးပို့လှူဒါနျးခွငျးအလှူဝမျးရေးခကျခဲနတေဲ့ က […]